လေလံတင်ရန်အတွက် တည်ထောင်ထားသည့် ရှားပါး 32 LEGO Inside Tour တစ်ခု
05 / 03 / 2021 05 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1836 Views စာ0မှတ်ချက် 4000007 Ole Kirk ရဲ့အိမ်, ၇၅၂၉၄ Bespin Duel, အုတ်ခဲ, catawiki, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, Lego, အတွင်းပိုင်းခရီးစဉ် Lego, Lego Star Wars, LIT2009 Ole Kirk ၏အိမ်, Ole Kirk Christiansen, Star Wars, star wars အခမ်းအနား, Star Warsဖြေ - အင်ပါယာကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်, အင်ပါယာသို့ပြန်သွားရန်ကိုရို
မယုံနိုင်လောက်အောင် ရှားပါတယ်။ Lego Inside Tour သတ်မှတ်ပြီး နှစ် 40 ပြည့် နှစ်ပတ်လည် Lego Star Wars မော်ဒယ်ကို လက်ရှိမှာ လေလံတင်ရောင်းချနေပါတယ်။ catawiki.
Brick Fanatics p ကိုရartနေပြည်တော် catawiki လေလံဝဘ်ဆိုဒ်၏ အထင်ရှားဆုံးအချို့ကို မီးမောင်းထိုးပြရန် Lego- ဆက်စပ်စာရင်းများ။ ယခုအပတ်တွင် စုဆောင်းသူများသည် အရှားပါးဆုံးအချို့ကို လက်လှမ်းမီရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။ Lego 32 အုပ်ပဲကျန်တော့တဲ့ အတွဲတွေအပါအဝင် ထုတ်ဝေဖူးတဲ့အတွဲတွေပါ။
သင့်အတွက် ထင်ရှားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ရှာနေတယ်ဆိုရင် Lego စုစည်းမှု – မင်းရဲ့အပေါင်းအသင်းပရိသတ်တွေကို မနာလိုစိတ်စိမ်းလန်းစေမယ့် အမျိုးအစား- မင်းဘာကိုစစ်ဆေးတာထက် ပိုဆိုးနိုင်မလဲ။ catawiki လောလောဆယ် ဖမ်းဖို့ရှိတယ်။
LIT2009 Ole Kirk ၏အိမ်
အဆိုပါ 2012 Lego ဝန်ထမ်းလက်ဆောင် 4000007 Ole Kirk's House သည် ရှားပါးနေပြီဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့်ခြောက်လအတွင်း BrickLink မှ £400 ကျော်လွန်ရယူခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Ole Kirk Christiansen ရဲ့ 2009 version နဲ့ ယှဉ်ရင် တကယ့်ကို မှုန်ဝါးဝါးပါပဲ။ Lego အတွင်းပိုင်းခရီးစဉ်
အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသော ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွင် စောင်ရေ ၃၂ စောင်သာ တွေ့ခဲ့ရသည်။ LIT2009 Ole Kirk ၏အိမ် တစ်ခုချင်းစီကို လက်ဖြင့်နံပါတ်တပ်ပြီး ဒီဇိုင်နာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော Billund ၏ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကို ဖယ်ရှားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ကော်ပီကို ဖမ်းယူနိုင်ရန် ကူးယူရောင်းချပြီးနောက် ဈေးကွက်တွင် ရှာဖွေရန် အလွန်မဖြစ်နိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။ catawiki အဓိကအားဖြင့် Lego သရဖူရတနာများနှင့် ညီမျှသည်။
လက်ရှိလေလံမှာ ယူရို 1,200 (နှင့် catawikiနောက်ဆုံးရောင်းချမှုတန်ဖိုးမှာ ယူရို ၁၅၀၀ မှ ယူရို ၂၅၀၀ ဖြစ်သည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းထားသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီလက်မှတ်ထိုးပြီး နံပါတ်တပ်ထားတဲ့ အတွဲ (1,500 ထဲက 2,500 ကို သင်သိချင်နေတယ်ဆိုရင်) တခြားဘယ်နေရာမှာမှ ရှာမတွေ့ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒါက အခြေခံအားဖြင့် အရှားပါးဆုံးတွေထဲက တစ်ခုကို ရွေးဖို့ သင့်တစ်ခုတည်းသော အခွင့်အရေးပါပဲ။ Lego အချိန်တိုင်းအစုံ။
ဤအပန်းဖြေရုပ်ရှင်ရုံ၏ အထင်ရှားဆုံးမြင်ကွင်းသည် ယမန်နှစ်အတွက် မူလထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Star Wars The Empire Strikes Back ၏ နှစ် ၄၀ ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် စည်းဝေးကြီး။ ကပ်ရောဂါက အဲဒီအဖြစ်အပျက်အပေါ်မှာ ကီဘော့စ်ကို တင်လိုက်တဲ့အခါ၊ Lego အဖွဲ့အစား ဖြန့်ဝေသည်။ ၇၅၂၉၄ Bespin Duel ၎င်း၏တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှတဆင့် - သို့သော် US တွင်သာဖြစ်ပြီးကန့်သတ်အရေအတွက်တွင်သာ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ Luke Skywalker နှင့် D တို့ကြား ပြိုင်ဆိုင်မှု၏ mint-in-sealed-box ကော်ပီကို ယခု သင်ရရှိရန် နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခု ရလာပါသည်။arth Vader - Jeremy Kyle ၏ intergalactic version တွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးသူ - သင်သိပါသည်။ catawiki. လောလောဆယ် ယူရို 46 နဲ့ နောက်ဆုံးရောင်းဈေး ယူရို 160 မှ 230 ယူရို ပါရှိတာကြောင့် လိုချင်ရင် မြန်မြန်မှာယူလိုက်ပါ။
← Lego Ideas 21326 Winnie the Pooh ပြန်လည်သုံးသပ်
သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲသင်၏ချောင်နေတဲ့ LEGO အုတ်များကိုဘယ်လိုသိုလှောင်မလဲ →